BOSTON HUAHUA DOG MACLUUMAADKA IYO SAWIRADA - EEYAHA
Boston Huahua Dog Macluumaadka iyo Sawirada
Boston Terrier / Chihuahua ey isku dhafan oo isku dhafan
Daemon the ChiBo oo 2 jir ah— Ma qiyaasi karo eey ka kaamil ah isku dhafkayaga yar ee Boston Terrier / Chihuahua mix (ChiBo). Daemon wuxuu kaliya doonayaa inuu na farxiyo oo adeeco. Isagu waa caqli badan yahay oo si fudud ayuu u tababaran yahay, in kasta oo uu lahaa isku xirnaan madax adag markay tahay guri dhisid . Weligiis ma calalin hal toy oo aan isagu ahayn. Wuxuu jecel yahay ilmaheena 10-ka bilood jira mana liqo mana calaliyo waxyaabaha ay caruurtu ku ciyaaraan wuu ogyahay farqiga u dhexeeya. Wuxuu sifiican ula ciyaaraa eeyaha kale iyo bisadaha iyo shisheeyaha. Markay shisheeyayaashu arkaan markii ugu horraysay waxay u malaynayaan inuu yahay Ey yar oo Feedhyahan ah. Wuxuu leeyahay astaamo ka badan Terrier-ka Boston marka loo eego Chihuahua. Aad buu u yaryahay inuu ciyo xaqiiqdii wuu cibaado yaryahay Akitaayga oo aan dabiiciyan. Markuu ciyo waa sababta oo ah qof qalaad ayaa toos uga socda gadaasheena ama isku dayaya inuu albaabka albaabkiisa ku laalo warqad. Wuu firfircoon yahay wuuna jecel yahay inuu ciyaaro oo uu ordo laakiin hadaan TV daawado kaliya wuxuu doonayaa inuu dhabta ku jiro. Haddii aan kombiyuutarka ku jiro cagtayda ayuu ku jiraa. Waxaan jeclaan lahaa inaan helo mid kale oo lamid ah. '
Boston yaa tagaya
Boston Huahua ma ahan eey saafi ah. Waa iskutallaab udhaxeysa Boston Terrier iyo Chihuahua . Habka ugu wanaagsan ee lagu go'aamiyo dabeecadda noocyada isku dhafan ayaa ah inaad ka raadiso dhammaan noocyada iskutallaabta isla markaana aad ogaato inaad ka heli karto isku-darka mid kasta oo ka mid ah astaamaha laga helo nooc kasta. Dhamaan kuwan isku dhafan eeyaha isku dhafka ah ee ladayacayo ma ahan 50% saafi ah ilaa 50% daahir ah. Aad bay caan u tahay in kuwa wax soosaara ay tarmaan iskutallaabno jiil badan .
Naadiga Isku-dhafka Canine ee Mareykanka = Boston Huahua
IDCR = Diiwaangeliyaha Kaydinta Cunnada ee Caalamiga ah®= Bo Chi
Kani waa Darla qiyaastii 12 toddobaad. 'Hooyadeed waxay ahayd 16-lb. Boston Bull Terrier aabaheedna wuxuu ahaa 7-lb. dhaadheer Chihuahua . Runtii waa qof aad u caqli badan. Markay ahayd 12 usbuuc oo kaliya ayay gebi ahaanba loo tababaray inay banaanka u baxdo way fadhiisan kartaa, jiifsan kartaa, gariiri kartaa (labada lugoodba) wayna rogi kartaa. Waxa kaliya ee aysan runti sameyn karin waa inay ku dul socoto xarig !!! Waxaan u maleynayaa inay tahay iyada oo aad u yar ayay u isticmaashay in lagu wareejiyo meel kasta. '
sawirada eeyaha shar pei
Kani waa Darla, Boston Bull Terrier / Chihuahua isku darka qiyaastii 5 toddobaad.
'Borat waa Bo-Chi waxaana isoo siiyay aniga iyo ninkayga saaxiibkey kaas oo u dhiibi doona inuu korsado. Xilligaas wuxuu jiray 14 toddobaad. Isagu waa 10.6 lbs. hadda waxaana la filayaa inuu u dhexeeyo 15-20 rodol. buuxa. Waa eey aad u dhaqan wanaagsan, aad u ciyaar badan oo caqli badan. Wuxuu uqaatay inuu si dhakhso leh ula shaqeeyo guriga, iyadoo shilalka ay yaryihiin oo ay aad uyar yihiin. Isagu waa qof aad u jecel oo jecel in la koolkooliyo. Wuxuu ku fiican yahay carruurta yaryar, eeyaha kale iyo shisheeyaha. Looma soo bandhigin bisadaha sidaa darteed ma naqaano sida ay taasi ku socon doonto. Wuxuu horeyba u cadeeyay inuu yahay waardiye wanaagsan wuxuuna aad uga feejignaadaa dadka ka baxsan albaabka aqalkayaga wuu na ogeysiiyaa laakiin si xad dhaaf ah uma ciyo. '
Gabadha Ilmaha ah, isku darka reer Boston Huahua (Boston Terrier / Chihuahua mix) markay tahay 2 sano
Waxay-u tahay cunugga reer Boston Huahua ee 7 toddobaad jirta (Boston Terrier / Chihuahua dog mix)
muqisho dhashay dhanxanegga dillaacii
'Kani waa sawirka Leo. Isagu waa saddex bilood jir ah Boston Terrier Chihuahua mix. Aabaha waa Boston. Dabeecadiisu aad ayey dib u dhigtay, feejignaan, daacad (wuu i jecel yahay ilaa aan dhinto). Illaa iyo hadda wuxuu umuuqdaa inuu yahay mid si caqli gal ah u fahmay. Wuxuu umuuqdaa inyar Boston dabeecad ahaan. Marar dhif ah buu qayliyaa. Waxaa laga yaabaa 1 inuu ciyo inuu i ogeysiiyo qof albaabka jooga. Wuxuu jecel yahay eeyaha kale wuuna ku fiican yahay xayawaanka kale. Isaga ma jecli in keligaa laga tago laakiin wali wuu baranayaa. Waxaan haystay isaga laba toddobaad oo waxaan u arkaa inay sahlan tahay isaga tababar . Isagu aad buu u macaan yahay oo jecel yahay. Dad badan ayaa i weydiiyay halka laga helo eey isaga oo kale ah. Miisaankiisu waa 10 rodol. hadda oo dhererkiisu yahay 14 inji oo aan dabadiisa lahayn. Markaan runta ka hadlo waxaan layaabay sida wanaagsan ee uu udhaqmayo oo waa eey yar yar. Waa weheliye cajiib ah. Meeshuu kula socdo ayuu jecelyahay gaariga. Xitaa markii eeyaha kale ay ku ciidaan isaga wuu aamusnaadaa.
Lucy Loo isku darka Boston Huahua (Boston Terrier iyo Chihuahua mix) markay 9 bilood jirsatay iyadoo xiran shaati— 'Lucy Loo waa Bo Chi. Waxaan ka helay Lucy saaxiibkay oo maan weydiisan karin eey ka fiican. Hagaag waxaan leeyahay eey, Lucy ma aha eey waa saaxiibkeey wehelkeyga cunugeyga. Iyadu waa waxa ugu qosolka badan ee aan abid arko. Waxay ka tamar badan tahay 2 socod baradka ah. Markay banaanka joogto waxay orod ku wareejisaa hareerahayga sida ugu dhakhsaha badan ee ay u ordi karto waxayna jeceshahay inay ciyaarto ciyaar. Markay tooydii dib u soo celiso ayay igu jeesjeestaa. Haddii aan u dhaqmo sida aan iska indhatirayo iyadu waxay ku jiifsan doontaa toy-ga dhabta dhabta ah ama waxay igu muquunin doontaa sankeeda. Lucy waa wax la mid ah. Qof kasta oo ay la xiriirto jacayl ayaa u haya iyada. Nasiib ayaan ku leeyahay Lucy Loo noloshayda. '
mandiil cirfiid sanka guduud sanka pitbull
Bo reer Boston Huahua mix puppy (Boston Terrier iyo Chihuahua) - Markii uu jiray hal sano waa qof aad u jecel oo caqli badan. Wuxuu ka fekerayaa inuu sariirta la dhigto toy-ga bisadda, ka dibna uu helo mid uu isagu isagu ku ciyaaro. Wuu ka buuxa tamarta, laakiin haddii aad rabto inaad fadhiisato maalinta oo dhan, wuu ku ag joogi doonaa dhinacaaga. Bo waa nin yar oo qosol badan oo ku habboon nolosheena. Isagu waa eey wanaagsan. Aad ayaan u jecel nahay isaga.
Kala iibso Bochi Boston Terrier Chihuahua oo ah eey yar markay tahay 4 bilood jir— 'Keller waa Bochi. Aabaheed waa Boston Terrier iyo hooyadeed Chihuahua. Waxay ahayd eeyga kaliya ee qashinka ku jira. Waxay gabi ahaanba jeceshahay dadka, xitaa shisheeyaha. Waxay jeceshahay raacitaanka raacista iyo la ciyaarista xayawaankeenna yaryar. Toy ay jecel yahay waa sac sac iyo kubbadeedii. Waxay ciyaari laheyd qabashada saacado. Habeen walba way koolkoolisaa dhinacayga. Saaxiibaday ma xamili karto haha. Waxay ii sheegtaa markasta in eeygu u maleeyo inay tahay saaxiibtay.
Boston Huahua Sawirada 1
5 toddobaad puppy puppy puppy
jarmal adhijir isku dhafan madow iyo tan coonhound